Uncategorized – Page 70 – Shabakadda Amiirnuur
Al Shabaab Oo Gaalkacyo Ku dishay Madaxii Amniga iyo Nabad gelyada Hay’adaha Q.Midoobay ee Mudug.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar qorshaysan oo xalay ka dhacay Koonfurta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegtay in howlgal qorshaysan ay ku dishay Madaxii amniga iyo Nabad gelyada Hay’adaha Q.Midoobay ee howlgala gobolka Mudug waxaana lagu […]
Gaadi Gaashaaman oo Amisom Looga Gubay Muqdisho, Sarkaal Lagu Dilay Balcad Iyo Cabdi Bile Lagu Gubay Dukeedka Xamar.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax aad u xooggan oo ciidamada shisheeyaha AMISOM lagula beegsaday waqooyiga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wararka laga helayo xaafadda Suuqa Xoolaha degmada Huriwaa ayaa sheegaya in qarax xooggan lala helay mid kamida gaadiidka gaashaaman ee ciidamada AMISOM xilli uu ku socdaalayay isgoyska Ex.control […]
Ciidanka Mareykanka Ee Bankarafta oo Gaadiid Dad Weyne Ku Gubay Shabeelaha Hoose.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyaadka ciidamada Mareykanku tababareen ee Bangaraafta loo yaqaan ay xadgudubyo ugeysteen dad shacab ah. Xalay fiidkii ayay maleeshiyaadka Bangaraafta waxay duullaan ku qaadeen tuulada Baloow ee dhacda duleedka deegaanka Bariire, sida ay sheegeen dadka deegaanka Maleeshiyaadka ayaa gubay gaadiid ay lahaayeen […]
Aqoonyahan Suldaan Garyare oo Ka Hadlay Qariidadda Ay Itoobiya Sameysay Iyo Micnaha Ku Duugan.
Suldaan Maxamad Gar Yare oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee sida aadka ah ugu dhuun daloola arrimaha Bariga iyo Geeska Afrika ayaa idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan uga waramay Sawirkii ay shalay baahisay dowladda Itoobiya oo ay kusoo bandhigtay muuqaalka qaaradda Afrika kaasoo ay ka saartay dalka Soomaaliya, sida muuqatayna […]
Dowladda Itoobiya Oo ka hadashay Khariiraddii ay soo saartay Ee Soomaaliya lagula daray dalkeeda.
Markii ugu horraysay dowladda Xabashida Itoobiya ayaa ka hadashay sawir ay shalay ku faafisay warbaahinteeda gaarka ah kaas oo muujinayay in Itoobiya ay qabsatay Soomaaliya. War rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa lagu xaqiijiyay in uu saxyahay sawirka lagu faafiyay boggeeda Internetka balse waxay ku sifaysay […]
Sawirro: Tartanka Qur’aanka Dadka Waaweyn ee Wilaayaatka Islaamiga ah oo lasoo gaba gabeeyay.
Sannad kasta marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan wilaayaadka islaamiga ah ee Soomaaliya waxa ka dhaca tartamo dhanka Qur’aanka ah oo ku bilawda heer degmo kadibna heer wilaayo ugu dambayna waxa ku tartama dhammaan wilaayaadka, waxana kasoo qeyb gala guud ahaan qeybaha bulshada.Maalmihii aan soo dhaafnay masjidka Towxiid ee […]
Qaraxyo Khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada Dowladda Oo Ka Dhacay duleedka Muqdisho iyo Sh/Hoose.
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay qaraxyo saacadihii lasoo dhaafay ciidamo katirsan dowladda Federaalka lagula beegsaday magaalada Muqdisho iyo deegaan katirsan Shabeellaha Hoose. Qarax maanta gelinkii dambe ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha gaar ahaan halka loo yaqaan Isbaaro Shabeelle ayaa sababay dhimashada sedax askari iyo dhaawac soo gaaray […]
Dhageyso: Muxaadaro Ku Saabsan Fadliga 10-ka Dambe Ee Bisha Ramadaan waxaa Jeedinaya Sheekh Fu’aad.
Maanta oo ah taariikhdu tahay 20 Ramadaan waxaa lagaaray 10-ka maalmood ee fadliga badan oo ay sunno tahay in qofka muslimka ah oo badiyo cibaadada si uu u helo habeenka Leylatul Qadri oo Allaah ku sheegay in uu ka kheyr badanyahay Kun bilood. Nabigu Sallallaahu Caleyhi Wasalama marka lagaaro tobanka […]
Daawo Video: Alkataa’ib Oo Filim kasoo tartannada Qur’aanka Q.2aad.
Mu’asasada AlKataa’ib ayaa baahisay Juzkii 2aad ee Filimaan Lagu soo gudbinayo Tartankii Quraan Akhriska ee Ramadankii la soo dhaafay ka dhacay wilaayaatka Islaamiga. Xalqadan ayaa lagu soo badhiygaa ardayda ka qeybgashay tartankii 15-ka Juz, waxaana ka soo muuqanaya arday aad u da’yar oo ay ka muuqato aqoon, karti iyo firfircooni. […]
Halgankii Daraawiishta waa barnaamij taxane ah oo ay Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan ka diyaarisey halgankii Sayid Muxamed Cabdulle Xassan iyo raggii uu hogaaminayay ay la galeen gumeystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga ee kusoo duulay Soomaaliya. Halkan ka dhagayso Halgankii Daraawiishta 17